Dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska”Ma jirto sabab ay Iran ugu baahantahay inay kobciso uraniumkeeda | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska”Ma jirto sabab ay Iran ugu baahantahay inay...
Dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska”Ma jirto sabab ay Iran ugu baahantahay inay kobciso uraniumkeeda
Saddexda wadan ee reer Yurub ee saxeexay heshiiska Nukliyeerka Iran ayaa walaac xooggan ka muujiyay qorshayaasha tayeynta yuraaniyamka ee xukuumadda Tehran.
Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen, Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa waxay ku sheegeen in uraniumka Iran la kordhiyo boqolkiiba lixdan ay tahay horumar halis ah.
Waxay sheegeen inaysan jirin sabab ay Iran ugu baahantahay inay kobciso uraniumkeeda. Madaxweynaha Iiraan, Xasan Ruuxaani, ayaa sheegay in go’aanka lagu kobcinayo barnaamijka tayeynta yuraaniyamkooda uu jawaab u ahaa weerar ay Israa’iil ku qaadday mid ka mid ah xarumaheeda nukliyeerka.
Iran ayaa sheegtay Talaadadii inay si weyn kor ugu qaadi doonto hanaanka tayeynta boqolkiiba lixdan. Sare u qaadiddan ayaa waxay aad uga sarreeysaa tii la isku raacay heshiiskii 2015-kii ee Niyukleerka Iran, inkastoo ay ka yartahay caddadii looga baahnaa in Bambo atomic ah lagu sameeyo.
Mdaxaweyne Xasan Rouhani ayaa sheegay in qaraxa lala beegsaday xarunta uu ahaa weerar Israel ay ka dambeeysay isla markaana Iran ay dib u tayayn doonto iyadoo adeegsanaysa qalab casri ah, si loo xoojiyo tayeynta uraniumka.
Previous articleDenmark oo noqotay dalkii ugu horreeyay ee joojiya isticmaalka tallaalka fayraska corona ee AstraZeneca.
Next articleApp-ka codadka tooska lagu wadaago ee Clubhouse waxaa ka abuurmay sheekooyin
Ciidamada ammaanka Jubbaland oo Howlgalo ka bilaabay Kismaayo
.. Wararka ka imaanaya saakay Kismaayo ayaa sheegaya in halkaasi ciidamada ammaanka ee Jubbaland ay ka sameeyeen howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada. Ciidamada ayaa...
Daawo Ciidamada Xooga Dalka ee Badbaado Qaran oo ku laabtay Xerooyinkii...
Geerida Culimadu waa Musiibo!
War deg deg ah: Dagaal goor dhawayd ka Qarxay Km4 ilaa...
Qoor Qoor oo ka hor yimid mudo kororsi Baarlamaanka uu...
Dr Tedros “ oo sheegay shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da’da...